OTU ESI EME MA Ọ BỤ GBANYỤỌ BỌTỊNỤ FN NA LAPTỌỌPỤ - WINDOWS - 2019
Na-enyere ma na-egbochi Fn isi na laptọọpụ
A na-eji nwayọọ nwayọọ jupụta oge ekele nke akwụkwọ na ndụ anyị na ekele eletrik dị iche iche na-abịa dochie ha. N'isiokwu a, anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na obere ndepụta nke mmemme na enyemaka nke kachasị mfe iji mepụta kaadị ekele.
Onye otu onye a mepụtara maka atụmatụ ndị na-abụghị nke azụmahịa, ya mere ọ dị maka nbudata na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị n'efu. Isi echiche nke SP-Kaadị bụ ekele ndị na-egosipụta na desktọọpụ. Onye ọrụ ahụ na-emepụta ịbịaru n'ihu na nchịkọta akụkọ ma chekwaa ya na usoro EXE, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-ezigara onye na-ezigara ya. Ọ ga-ebido faịlụ ahụ ma hụ ekele na-egosi na desktọpụ ya.
Ihe omume a anaghị achọ ihe ọmụma ọ bụla ma ọ bụ nkà, ọ dị mfe ịmụta ma nwee ọrụ na ngwaọrụ ole na ole, ya mere, ọ naghị enwe ohere na kọmputa ma ghara ịrụ ọrụ na arụ ọrụ, a na-echekwa ọrụ ndị a na sekọnd.
Nna ukwu nke kaadị
Aha onye nnọchiteanya ahụ na-ekwuchitere onwe ya - ngwanrọ ahụ dị mma naanị maka ịmepụta ihe ekele na ederede. Ndị mmepe agbalịrị ịgbakwunye ọtụtụ ndebiri ma nye ndị ọrụ ntọala zuru ezu maka mpaghara ọ bụla ka ekele ahụ wee pụta dịka ha na-anọchi anya ya.
"Master of Postcards" na-akwado ọrụ na ọrụ dị mgbagwoju anya, dịka ọhụụ site na nkwado nke ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ọkwa. Na mgbakwunye, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị ṅaa ntị na ịkwadebe ederede ekele. Enwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ihe omume ahụ.
Na-echekwa kaadị nnabata
Ịmepụta ndepụta a bụ Kaadị foto - ihe kachasị emepe na ngwa-bara ọgaranya. Enwere ọtụtụ ihe oyiyi blanks, okpokoro akụkụ, ma nke a abụghịcha. Mgbe foto a na-uploaded, onye ọrụ nwere ike ịgbakwunye mmetụta na nzacha, nke nwere ike ịgbanwe onyinyo ahụ karịa ka a na-enyo.
Site na ndabara, a na-enye ekele maka isiokwu dị iche iche dị n'ụdị uri, ma mgbe ị zụrụ nkọwa zuru ezu, a ga-atụkwasị ọtụtụ ọnụ ọgụgụ. E nwere asụsụ Russian, ikpe mbipute a na-akparaghị ókè, ọ ga-enyekwa ohere iji nyochaa arụmọrụ nke kaadị foto.
Download kaadị foto
Na nke a, analysis anyị na-abịa ná njedebe, ma eleghị anya, ụfọdụ ndị ọrụ mara ndị nnọchiteanya ndị ọzọ. Anyị gbalịrị ịṅa ntị na mmemme ndị dabara adaba maka ịmepụta akwụkwọ ozi.